Project Opensky 777 aga jide swich nsogbu.
ajụjụ Project Opensky 777 aga jide swich nsogbu.
1 afọ 7 ọnwa gara aga #662 by ricsmi
Ebudatara ma ama na Project Opensky Boeing 777 taa na ya a mîkemeke ụgbọelu, nanị nsogbu m na-enwe bụ na heaading jide swich adịghị ka na-arụ ọrụ.
Set auto pilot na na dị ka kwa na mbụ na ịtọ aga na ị chọrọ wee pịa jide swich ka ị ga na ndị ọzọ ugbo elu, ma ọ dị na igbachi na nke ugbu a N'ezie kama, m na-agbalị ụdị ma mgbe ọ na-eme otu ihe ahụ .
Ihe ọ bụla echiche ụmụ okorobịa, ọ bụ na a ahụhụ ma ọ bụ m na-nnọọ na-eme ya na-ezighị ezi?
1 afọ 7 ọnwa gara aga #664 by ricsmi
Ok m na ọ dị ka kwubiri na ya, na-enyo m mkpa na-eji trhe Nav Họrọ button, ọ bụghị nav ejidere, naanị ihe bụ Nave họrọ button na-arụ ọrụ na 2d kokpiiti nke i cant guzo iji.
Ya mere m ga-agụgharị m ajụjụ, onye ọ bụla mara na ọ bụrụ bụ omume na-gbanwee na nav jide button na 3d kokpiiti na nav họrọ button kama?